Isibuko ngokukhanyisa endlini yokugezela
Kuzo zonke izibuko zokugezela kuyinto ebaluleke kunazo zonke, benza njengendlela yokuhlobisa amahle futhi, ngesikhathi esifanayo, benza imisebenzi ewusizo. Izakhamuzi zasegumbini lezi zindawo zisetshenziselwa izinqubo zezimonyozonke emhlabeni jikelele, ngakho-ke isibonisi esincane esinezinto ezimbi ezibonakalayo lapha sidumazeka kakhulu, ngisho nangokunokwenzeka ukufumbathisa imali engabizi. Ungakhohlwa mayelana nekhono elihle lalezi zinto ukushintsha ukubuka okubonakalayo kwesikhala. Uma ucabanga ukuthi igumbi lokugezela liyingcosana futhi alikhululekile, khona-ke uthenge lapha isibuko esikhulu. Le nqubo ngokushesha emehlweni akho iyokwenza ngisho nendawo encane kakhulu kakhulu. Lapha sifuna ukuthinta umzuzu owodwa obaluleke kakhulu onendima enkulu ekududuzeni nasekuseni kuleli gumbi - ukukhanya kwezibuko.
Kungani kufanele ngifake isibani eceleni kwesibuko?
Ukusetshenziswa kwabesifazane ukwakheka, ukusheba amadoda abhekene nokubhekwa noma ubhedu ukusika - lokhu kukhwabanisa okwanele, okudinga isenzo esinembile kakhulu. Ukuze bakhiqize ngaphandle kwamaphutha kungenzeka kuphela ngokukhanyisa okuhle kakhulu. Ngokwemvelo, isibani esisodwa phakathi nendawo esilingeni asikwazi ukunikeza amandla okwanele kulezi zinhloso. Lapha udinga uhlelo olwengeziwe lwamagesi kagesi olugxila emisebeni ngendlela efanele futhi angaboni amehlo omuntu. Kumele kukhunjulwe ukuthi izihlungi zombala zinemfanelo emihle kakhulu yokuhlobisa, kodwa ngokuvamile ziyophazamisa izinqubo ezibucayi, zihlanekeze izici zobuso. Ngakho-ke, kungcono ukukhetha ukukhanyisa izakhiwo nge-matt shade noma ube nale ndawo kanye namadivayisi amaningana enza imisebenzi ehlukahlukene.
Izinhlobo zezibuko zokugeza nokukhanya
Izibuko zokukhanyisa zangaphakathi zokugeza
Ukuze unikeze ikamelo i-charter nokubukeka okwedlulele ngaphezulu kuzosiza idivaysi yokukhanyisa eyakhiwe ngqo ezibukweni. Ama-luminous bands ngokuvamile atholakale ezinhlangothini noma emkhakheni wendwangu, nakuba manje ngenjongo yokuhlobisa, kusetshenziswe ukuhlukahluka okuhlukahlukene. Ngalesi sikhathi kunombuzo wokugcina ugesi. Izibani ze-fluorescent ziveza ukukhanya okukhanyayo, umbono okhandlayo. Into ewusizo kakhulu ukuthenga isibuko endlini yokugezela nge-light diode ehlala njalo futhi ehlala njalo. Ngaphezu kwama-LED amhlophe, amadivayisi wombala nawo afakwe kumadivayisi afanayo. Ngendlela, ukutholakala kwezibani ezakhelwe ngaphakathi akuvimbeli ukufakwa kwezinombolo noma ezinye izibani. Ngokuphambene nalokho, kwezinye izindawo ezithandana nazo lezi zindawo zibukeka zizuzisa, ngaphezu kwalokho, amadivaysi angeziwe azokwenza ukuthi izibuko zisebenzise kahle kakhulu ezindaweni zabo ngezinhloso zazo.
Ukukhanya kwangaphandle endlini yokugezela ngenhla kwesibuko
Izibuko ezijwayelekile zesayizi elijwayelekile zidinga amaphuzu amabili, kodwa uma le nto inendawo enkulu kakhulu, kuzomele ufake amadivayisi ambalwa. Kulokhu, ngezinye izikhathi sisebenzisa indlela yokufaka imithombo ekhanyayo ngokuqondile esibukweni sesibuko, besebenzisa i-glue noma izinsimbi ezikhethekile. Ukuklama kwezibani ezinjalo kungase kuhluke kakhulu. Ngaphambilini yayisetshenziswe izikhwama ezifakwe ezinhlangothini. Uma ufuna ukuhlobisa igumbi ngesitayela se-retro , khona-ke ungathola kalula amadivaysi womklamo oyifunayo ngendlela yamafleji noma izibani. Isibuko nxazonke endlini yokugezela nokukhanyisa kubheka kuqala, lapho imithombo yokukhanya ibe namapholethi avela kwendwangu yokuhlobisa, inhlaka , ingilazi noma i-chic crystal. Into esemqoka lapha ukukhipha izinto ezinjalo ezingeke ziphume masinyane emswakeni ophezulu.
Indlela yokubeka tile?
Amapulangwe ayenziwe ngokhuni ukuze aphumule izwe elihle
Udonga lwezingane ngombhede kanye netafula
Ukufakwa kweminyango yangaphakathi
Iminyango yangaphakathi MDF
Isibani esibheke phezulu
Idili emgodini ngebhokisi lesigqoko
I-Console transformer yethebula
I-window-sills eyenziwe nge-granite
Idizayini yanamuhla yamakhethini
Izilungiselelo zokukhanyisa izikhala
Amaqabunga abomvu ama-strawberry - isizathu
I-Fahitos - iresiphi
I-Chimera - inganekwane, yiluphi uhlobo lwesidalwa lokhu?
Isobho se-mushroom cream nge-mushrooms
Ukunakekela isikhumba esomile
Ikhekhe elilula - izindlela zokupheka ezingavamile zezintandokazi!
Kungani utamatisi uqhekeka?
Kuyini ukuqapha futhi kungani kuyadingeka?
Izingubo zokugqoka ezingu-2014
Cat Lounger for Uqobo
Ama-biscuits e-classic we-ginger ayipheka ukudla okumnandi okumnandi kuwo wonke umuntu!
Isigqoko sokugqoka esikhwameni
Indlela yokutshala i-celery?
Imincintiswano yezingane ezineminyaka engu-7 ubudala
I-Wall Mural Eiffel Tower
Izindlu ezinhle zezwe
Amafutha we-Badger - isicelo sokukhwehlela
Ngingathatha ama-antibiotics kanye ne-antiviral kanyekanye?
Umlando Wombuso Wezintathu